Nagarik Shukrabar - स्वास्थ्य
शनिबार, ०२ असोज २०७८, ०४ : २४
कम्पन दिने चुम्बक थेरापी
चुम्बक चिकित्सा शारीरिक व्यायाम गर्ने विभिन्न उपायमध्ये एक भरपर्दो तथा सरल र सहज व्यायाममा पर्छ। चुम्बक चिकित्सालाई शारीरिक स्फूर्ति ल्याउने व्यायाम चिकित्साअन्तर्गत लिइन्छ।
स्तन सर्जरीमा संक्रमण
महिलाका स्तन सौन्दर्यका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छन्। मिलेको स्तनको आकार नहुँदा महिलामा दैनिकीमा असर पर्नुका साथै तनाव उत्पन्न हुनसक्ने देखिएको चिकित्सक बताउँछन्। स्तन ठूलो हुँदा ढाड दुख्ने, हिँडडुलमा असहजता आउने जस्ता समस्या हुन्छन्। सानो आकारका स्तन भएमा महिलामा तनाव उत्पन्न हुनसक्छ।
केकीकाे फ्यान हुँदा.....
ऊसँग रिलेसनमा बसेको करिब करिब आठ महिना जति भएको छ। सुरुमा उसैले मलाइ प्रपोज गरेकी थिई। सम्बन्ध ठीकै थियो तर हिजोआज साना–साना कुरामा पनि झगडा मात्र गर्न खोज्छे। म केकी अधिकारीको ठूलो फ्यान हुँ।
मस्तिष्क सक्रिय राख्ने खाना
असन्तुलित खानपानको कारण डिप्रेसन, सिजोफेनिया, डिमेन्सिया, अल्जाइमर्स, हाइपर एक्टिभिटि डिसअर्डरजस्ता मानसिक रोगको जोखिम हुने मनोविद् गोपाल ढकाल बताउँछन्।
यौनमा क्याबिन ज्वरो
यौन सम्पर्कको अभाव तथा अतृप्तिमा व्यक्तिमा बेचैनी तथा विरक्तिका कारण व्यक्ति निरास हुन पुग्छ। ‘विरक्ति र बेचैन’ को अवस्थालाई ‘क्याबिन ज्वरो’ भनिन्छ। यौन सम्पर्क गर्न नपाएको अवस्थामा व्यक्तिमा यस्तो समस्या उत्पन्न हुन सक्छ।
जाडोमा लाइट थेरापी
लाइट थेरापी चिकित्सकीय उपचारका रुपमा प्रयोग हुने क्रम बढ्दो छ। विशेषगरी यो विधि फिजियो थेरापी, आयुर्वेद चिकित्सा तथा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिमा शरीर फिट एण्ड फाइन राख्नका लागि प्रयोग हुने विभिन्न विधिमध्ये एक हो।
अति गर्दा शंका उत्पन्न
म २६ वर्षको अविवाहित पुरुष हुँ। मेरो एकजना प्रेमिका छ। कहिलेकाहीँ कोठामा भेटिन्छ। यसरी ऊ कोठामा आउँदा कोठा भित्र छिर्न पाको हुँदैन चुकुल लगाउन पनि बेर हुन्छ।
टन्सिलको समस्या जटिल बन्दै गएको अवस्थामा व्यक्तिको मृत्युसमेत हुन सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। बालबालिका अझ बढी टन्सिलको जोखिममा हुन्छन्।
शरीर पड्काउने ट्यापिङ थेरापी
व्यक्ति फिट रहने विभिन्न उपायमध्ये एक हो, ‘ट्यापिङ थेरापी’। ‘ट्यापिङ’ का पनि विभिन्न प्रकार हुन्छन्। शरीर फिट हुन मात्रै नभई हाडर्जोर्नी तथा मांशपेशीको दुखाईलगायतको अवस्थामा यो थेरापी गर्न सकिन्छ।
जाडोमा शुक्रकिटको सक्रियता
यौनिक जीवनका लागि जाडो मौसम उत्तम हो। जाडो मौसममा यौन जोडीले एक–अर्कामा आकर्षण गर्ने प्रवृत्ति उच्च हुन्छ। सामान्यतः यौनका मामलामा महिलाको भूमिका निष्क्रिय हुने भएकाले उनलाई मौसमले ठूलो प्रभाव नपार्ने भए पनि तुलनात्मक रुपमा जाडोमा कामोत्तेजना बढी हुनु स्वाभाविकै हो।
किन डराएको म ?
घरबाट निस्किँदा आमाले भन्नुहुन्छ भरे घर छिटो आउनु समय खराब छ, समय खराब छ कसरी ? यही समय भन्ने शब्दले मेरी आमालाई तर्साएको छ। समय खराब छ रे। किन यो समाज खराब भयो ?
बोसो पगाल्ने सौना
व्यक्ति विभिन्न उपाय अपनाएर शारीरिक तथा मानसिकरुपमा फिट हुन चाहन्छ। फिट रहने विभिन्न उपायमध्ये एक हो, सौना।
चिसोका कारण छालाको एलर्जी हुन्छ। जाडो मौसममा छाला चिलाउने, फुस्रो तथा खस्रो हुने, एलर्जी, बालबालिकाको गाला फुट्ने, कपाल, नाकको खोँच, आंँखिभौंको बीच भागमा बढी चायापोतो पर्ने, कत्ला निस्कने, नङमा असर हुनेजस्ता समस्या हुन्छन्।
यौन र घाम
सूर्यको प्रकाशमा व्यक्तिको कामोत्तेजना बढाउने शक्ति हुन्छ। सूर्यको प्रकाशले व्यक्तिको कामोत्तेजना बढाउन सहयोग पु-याउँछ। पुरुषको हकमा सूर्यको प्रकाशले टेस्टेस्टेरोनजस्तो पुरुष हार्मोनको सक्रियता बढाउँछ।
मेरो सुरक्षा कस्ले गर्ने ?
साढे १० बजेसम्मको क्याम्पसको पढाइ सकेर भर्खर घर आएँ। मैले कसैलाई लैंगिकरुपमा आरोप लगाउन खोजेको हैन। तर कोही किन यति विधि गिर्न सक्छ ?
बोसो पगाल्ने कला
शरीरलाई व्यायाम तथा विभिन्न किसिमका योगाभ्यास नगरी सुविधा दिँदा शरीरमा व्यायामको कमी भई अनावश्यक रुपमा बोसोको मात्रा बढ्न जान्छ। यस्तै व्यायामको अभावमा बोसोको मात्रा बढ्ने क्रममा विशेषगरी महिलाको कम्मरको तल्लो भागको दायाँबायाँ बोसोको मात्रा बढी हुँदा लुँदो झुण्डिन्छ।
एपेन्डिक्स फुटे जोखिम
‘एपेन्डिक्स’ नफुटेको अवस्थामा उपचार गर्दा बिरामीको मृत्युको जोखिम एक प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ, भने फुटेर जटिलता आएको खण्डमा शल्यक्रिया गरेर उपचार गरिँदासमेत मृत्युको जोखिम १५ देखि २० प्रतिशत हुन्छ।
जाडोमा सुखद् यौन
यौन जोडीका लागि जाडो मौसम उत्तम मानिन्छ। नेपाली समाजमा जाडोबाट बच्ने तीन उपाय अपनाउन सकिने कथनै छ। जाडोबाट बच्ने राम्रो उपाय न्यानो कपडा। दोस्रोमा आगो ताप्ने, हिटर बाल्ने तथा वातावरणकुलिन न्यानो कोठामा बसेर जाडोबाट बच्न सकिन्छ। जाडोबाट बच्ने तेस्रो विकल्प हो, यौन जोडीबीचको यौन सम्पर्क।
मैले आफैँलाई भेटेँ
हाई, म निक्कै मोटी काठमाडौँबासी केटी हुँ। म बच्चैदेखि मोटी थिएँ। मेरो मोटोपन र केटाकै जस्तो डाङडुङ गरिहाल्ने बानी भएकाले कसैले पनि मलाई जिस्क्याउने प्रयास गरेनन्।
उद्दण्ड रोगको जोखिम
डिप्रेसन र मेनियाका लक्षण ठ्याक्कै उल्टा हुन्छन्। डिप्रेसनको चरणमा कम बोल्ने व्यक्ति मेनियाको चरणमा पुग्दा धेरै बोल्न थाल्छ। डिप्रेसनको चरणमा रहँदा दिक्क मान्ने व्यक्ति अनावश्यकरुपमा खुसी हुन थाल्छ। डिँडडुलै गर्न नसक्ने व्यक्ति अनावश्यकरुपमा जथाभावी हिँड्न थाल्छ।